Sidee loo hagaajiyaa gadhka: Tilmaamaha iyo tabaha ugu fiican | Ragga Stylish
Sidee loo hagaajiyaa gadhka
Michael Serrano | | La xiiray, Daryeelka shaqsiyeed
Ogaanshaha sida loo xiro garkaaga ayaa fure u ah sawirkaaga inuu ku shaqeeyo awood buuxda. Waana taas Dharka, dhaqaaqa iyo muujinta naftaada qaab ahaan kuma filna haddii timaha wajiga ay ka fog yihiin kuwa ugu fiican..
Xiridda garka waxay ka kooban tahay bixinta taxaddar taxane ah timaha wejigaaga. Asalka dambe wax kale kama yihiin jarista iyo howlaha xadeynta in, iyaga oo ku celceliya, ay u muuqdaan kuwo aad iyo aad u fudud. Gaaritaanka heerka Kristofer Hivju iyo ragga kale ee garka weyn leh waa wax aan macquul aheyn haddii hiddo-wadaha uusan sax ahayn, laakiin ha ku jahwareerin.
1 Sida loo jaro gadhka
1.1 Qaabaynta gadhka
1.1.1 Isku dar maacuunta si aad u hesho natiijada ugu fiican
1.2 Dayactirka yar-yar
1.2.1 Waxay ilaalineysaa dusha dabiiciga ah
2 Sidee loo hagaajiyaa gadhka qoorta
3 Sidee loo hagaajiyaa gadhka dhabannada
3.1 Khad sare ama xariijin hoose
Sida loo jaro gadhka
Si aad u xajisid gadhkaaga waxaad u baahan doontaa saddex qalab: shanlo, maqas iyo dabcan a garka jarista leh qaabab dherer badan. Ku soo dhawaaw hawsha maskaxda ku haysa in, In kasta oo ay jiraan khadad guud oo ragga oo dhami raaci karaan, marka la eego habka, ma jiro mid keliya. Helitaanka nooca ugu wanaagsan ee gadhkaagu waa arrin la jaanqaad ah timaha wajiga iyo qaabka wejiga.
Gadhka ayaa dherer iyo ballacba u kora. Taasi waa faa'iido, tan iyo siinta qayb kasta daaweyn kala duwan si ay uga dhex muuqdaan wax badan ama ka yar guud ahaan waxay kuu oggolaaneysaa inaad sii dheereyso ama ballaadho wejigaaga iyadoo kuxiran qaabkiisa. Tusaale ahaan, timaha oo looga tago garka inbadan waxay ka caawineysaa in wejiga la dheereeyo. In kasta oo fahamka calaamadihiisu ay inta badan tahay arrin tijaabo iyo qalad ah, qaabka wejigaagu wuxuu ku dambayn doonaa inuu kuu saxo jidka saxda ah ee adiga kugu habboon.
Isku dar maacuunta si aad u hesho natiijada ugu fiican
Si fudud ugu shanlee aagagga kala duwan (barar barar, shaarib, dhabanno iyo garka) jihada koritaanka timaha una gudbi jaantuska lambarka la doortay. Maaddaama ay ku saabsan tahay raadinta natiijada ugu fiican, haddii aad ku wanaagsan tahay maqaska, horay ula sii soco. Feedh shaaribkaaga hoos oo nadiifi bushimaha kore iyaga, laakiin waa caadi haddii shaarubahaagu daboolo qayb ka mid ah bushimahaaga. Marka dhererka gadhku dhaafto daanka, adeegsiga maqasyada, iyo sidoo kale kuwa xiiraha gadhka ee bilaashka ah, ayaa noqda furaha.
In si faahfaahsan loo jaleeco had iyo jeer waxbay tartaa, gadhka (khaasatan kuwa dhexdhexaadka ah iyo kuwa dhaadheer) ayaa laga reebay. Hubi xaaladda meelaha dhibaatada ugu badan badanaa si gadhkaagu had iyo jeer u muuqdo mid aan cillad lahayn. Isugeynta xariiq xarig ah ayaa daaha ka qaadi doonta kuwa timaha aan hagaagsaneyn ama xad dhaafka ah.. Iska jar.
Waxay ilaalineysaa dusha dabiiciga ah
Garka badankood waxay u muuqdaan kuwo si fiican u muuqda markii la xiirayo, laakiin ha u hurin dhinacooda duurjoogta ah gebi ahaanba. Waa fikrad fiican in laga fiirsado kor u qaad dusha dabiiciga ah ee gadhkaaga halkii aad sawiri lahayd xariiqyo aad u adag iyo gooladaha macmalka ah.
Sidee loo hagaajiyaa gadhka qoorta
In kasta oo xariijinta qoorta ay toos u tahay, haddana khaladaad aan la fahmi karin ayaa badanaa la sameeyaa, sida kala soocidda garka daanka. Laakiin xusuusnow: sadarka qoorta ayaa loogu magac daray wax.
Walnut waa halbeegga halkan. Khadadka qoorta ee loo arko kuwa ugu sasabashada badan waa kuwa fadhiya wax yar oo ka mid ah lowska. Qaabka ugu badan ee la isticmaalo ayaa ah in farta iyo farta dhexe la saaro walnutka. Fartaada dhexe ee qaybta ugu weyn ee walnutkaaga, waxay noqon doontaa fartaada calaamadeysan oo calaamadeyn doonta dhererka ay tahay inaad qoorta ka xiirto.
Marka barta lowska la calaamadeeyo, sawir "U" khayaali ah oo ku xiraya lowska dhabarka dhegaha (Waxay umuuqataa mid ka dhib badan sida dhabta ah). Markaa waa inaad kaliya ku xiiraa waxa ka hooseeya aaggaas oo gar leh ama mandiil. Taasi waxay damaanad qaadeysaa qoorta oo aan cillad lahayn.
Sidee loo hagaajiyaa gadhka dhabannada
Qadka dhabanku wuxuu noqon karaa mid dabiici ah, sare ama hooseeya. Khad khad dabiici ah (oo aan lahayn nooc kasta oo faragelin ah) ayaa kaamil noqon kara. Laakiin sidoo kale waxaa jiri kara qaab aan sinnayn ama aagagga leh cufnaanta timaha oo hooseeya ayaa la muujin karaa. Ma jiraan wax khalad ah oo taas ku jira, laakiin waxaad si fudud u beddeli kartaa haddii aadan jeclayn.
Khadadka dhabannada sare iyo kuwa hoose ayaa kaa caawin doona gadhkaaga inuu u muuqdo mid qeexan. Sidii hore oo kale, waxaad isticmaali kartaa garka timaha, mandiil, iyo xitaa dunta.
Khad sare ama xariijin hoose
Khadadka sare waa barta dhexe ee udhaxeysa dabiiciga iyo tan hoose. Waa tan ugu isticmaalka badan maxaa yeelay waxay sifiican uga shaqaysaa ragga oo dhan umana baahnid inaad waqti iyo dadaal badan kubixiso dayactirkiisa. Waxay ku saabsan tahay ka takhalusida timo kasta oo aad dabacsan ka hesho dhabannada, adoo isku dayaya inaad ilaaliso qaab sida dabiiciga ah ugu macquulsan.
Khadadka hoose waxaa laga dhigi karaa qalooc ama afargeesle. Waa fikrad fiican haddii cufnaanta culeysku kaa hooseeyo dhabannadaada ama haddii aad uun u eeg tahay in laga doorbiday habkaas. Haddii aad u tagto qaabkan, waxaa muhiim ah inaad ku dhaqaaqdo dhexdhexaad. Haddii aad lumiso gacantaada, gadhkaaga waxaa loo dhimi karaa timo dhuuban. Xaalada Christian Bale, way u shaqeysaa isaga maxaa yeelay wuxuu leeyahay gadh dheer, cufan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Daryeelka shaqsiyeed » Sidee loo hagaajiyaa gadhka
Sidee looga nadiifiyaa wasakhda dhiigga ee dharka
Cadar udgoon fiican raga